facebook Gtalk virus — MYSTERY ZILLION
facebook Gtalk virus
February 2012 edited February 2012 in Antivirus & Virus
facebook ကနေ လင့်တစ်ခု ရလာတာ ကနေပြီး နိပ်လိုက်တာ .ပြီးတော့extrect ဖိုင်ကိုဖြေလိုက်တာ ခု အဲ ့ဒီ ကောင်က ဂျီတော ့ကနေ လင့်တွေ အော်တို ပို ့နေတယ်.ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး ..သိတဲ ့လူများ ကူညီပေးပါဦး အဲ ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး.ခင်ဗျာ....
နောက်ဆုံးမှာ ဖိုင် extention က JPEG န ့ဲဆုံးတယ်..အဆင်မပြေဘူး ဗျ.
အဲ့ဒါ ဘယ်လိုရှင်းရမယ်ဆိုတာ နည်းလမ်းလေးပေးပါဦး
February 2012 edited February 2012 Registered Users
This is fake virus link
This is screen shot . >>>>>>>http://i.imgur.com/zEobU.jpg
install and scan , clean nod 32 / kasper / ......
notice that the antivirus need to update
ဟုတ်တယ်အစ်ကိုတို့ရေ ကျွန်တော်လည်း Gtalk ကနေ လင့်တစ်ခုလာတာ မသိပဲ နှိပ်လိုက်မိတော့
အဲလိုပဲ ကျွန်တော့် အကောင့်က လူတွေဆီကို အကုန် လျှောက် ပို့တယ်။ သူတို့ကိုတော့ မနှိပ်ဖို့ အချိန်မီ
ပြောလိုက်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော့်စက်က တော့ အဲကောင် ၀င်သွားတယ်။ နောက်နေ့ကျတော့ အင်တာနက်က ကြိုးနဲ့ရော Wireless ရော လုံးဝမရတော့ဘူး။ network ကို ကိုက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်ဖြစ်မယ်။ နည်းမျိုးစုံနဲ့သတ်တာ မရလို့ ၀င်းဒိုး ပြန်တင်လိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်က ကြိုးနဲ့ရပေမယ့်
Wireless ကမရဘူး။ ချိတ်တော့ window is unable to connect selected netwrok လို့ပြတယ်။
ဒါနဲ့ usb wireless adapter တစ်ခု ချိတ်ပြီးစမ်းတော့လည်း အတူတူပဲ။ စက်မှာထည့်ထားတာက Avire free version ဆိုတော့ update လုပ်ပေမယ့် မသိဘူး ထင်တယ်။ ဝါယာလက် ပြန်ရအောင်
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ကူညီကြပါအုံးခင်ဗျာ။
change G-talk password .
It seem the access point changed access password.
အဲလို AP password ပြောင်းလိုက်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး အစ်ကို။ Router ကကျွန်တော့် အခန်းမှာလေ။
ကျွန်တော့် ဝိုင်ဖိုင်က သုံးခုတောင် ရှိတယ်။ တစ်ခုမှ ချိတ်မရဘူး။ အခုက ဝိုင်ဖိုင်တွေကို တွေ့တယ်။ ချိတ်လိုက်ရင် တုန် ဆို အခုန မက်ဆေ့ချ် ကတက်လာတာ။ မင်းရဲ့ ဝိုင်ဖိုင်က မရှိတော့လို့နေမယ်လို့ ပါသေးတယ်။ ဝိုင်ဖိုင်ဘက်ကပြသနာ မရှိဘူး။ ဖုန်းနဲ့ ချိတ်တောင် အခုချိတ် အခုရတယ်။ အခုက လက်တော့က ဖြစ်နေတာ။ လက်တော့မှာပါတဲ့ ဝါယာလက်နဲ့မရလို့ usb wireless adapter တပ်စမ်းတော့လဲ
အဲဒီမက်ဆေ့ချ် ပဲ တက်တယ်။ ချိတ်လို့ကို မရတာ။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာ စဉ်းစားပေးပါအုံး ဆရာတို့ရေ။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော့် router က ပါ့စ်ကို ဖြုတ်ပြီး လက်တော့ ဝါယာလက်နဲ့ ချိတ်တော့ ချိတ်လို့ရတယ်။
ပြသနာက ပါ့စ် ခံထားတဲ့ ဝိုင်ဖိုင်ကို ချိတ်တော့ ပါ့စ် တောင်း တဲ့ အထိ မရောက်ပဲ window is unable to connect selected network. the network may no longer in range. ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ချ် ပဲ
တက်နေတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ကူညီကြပါအုံးခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်​ထင်​တာ​တော့ အစ်ကို WiFi Signal Range များ ​ေး​နေ​လို့​လား​ပဲ/
အရမ်း​ေး​နေ​တော့ the network may no longer in range ဆို​တဲ့​အတိုင်း ချိတ်​မ​ရ​ဖြစ်​နေ​တာ​ပေါ့။
နောက်​တစ်​ခု​က အစ်​ကို့ WiFi Switch ကို On/Off လုပ်ြ​ကည့်​စေ​ချင်​တယ်။
အခု​အဆင့်​က Password ရှိ​တာ/မ​ရှိ​တာ​နဲ့​မ​ဆိုင်​သေး​ဘူး.Wifi နဲ့ laptop နဲ့​ချိတ်​မ​ရ​တဲ့​ပြ​သာ​နာ​ဖြစ်​နေ​တာ​ပါ။
ႈI am also infected this virus. If there isaway to kill this virus, please share me. Now i can't use gtalk and can only use gmail for chat. It is very serious. I already changed the gmail password and it isn't ok. And scanning with Avira and Symantec can't find any thread. Please advice me.
I am also infected this virus. In my computer this virus was not worked because i installed Microsoft Security Essential . This software is free. It is need to Up to date.
February 2012 Moderators
Just like @sawkhantnaing said, you can easily solve by using MSE [Microsoft System Essentials].
If you want more, simply check at link below.
Thanks my friends .... I can solve this problem now with Microsoft Security Essentials ....
ကျွန်တော် မနေ့က သူငယ်ချင်း pc မှာ အဲဒီလိုဖြစ်လို့ လုပ်ကြည့်ပေးခဲ့တယ်..
ကွန်ပြူတာကိုလေ့လာနေဆဲသူတစ်ယောက်ပါ။ မှားယွင်းနေခဲ့ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
ကျွန်တော့အထင်တော့ သူက ပေါ်ပေါ်တင်တင်ဖိုင်တစ်ခု အနေနဲ့ရှိနေလို့ သာမန် တွေက မဖျက်ရဲတာလား... မဖျက်မိတာလား မသိဘူး။
သူက Windows Xp မှာ C:\_Windows\_system32\_wmpbd32.exe ဆိုတဲ့ဖိုင်က လှုပ်ရှားနေတာပါ။
သူ့ကို manually ဖျက်လို့ရပါတယ်။
1. Run မှ msconfig ကိုရိုက်ပြီးခေါ်ပါ။
msconfig တွင် Startup မှ မရှိမဖြစ် program မှလွဲ၍ ကျန်တာအားလုံး ဖြုတ်ပစ်ပါ။
2.Windows ကို save mode နဲ့တက်ပါ။( Restart လုပ်သည်နှင့် F8 ကို နှိပ်ထားပါ)
3. Run မှ cmd ကို ခေါ်ပါ။
Run တွင် C:\_Windows\_system32\_attrib wmpbd32.exe -s -h -r ကိုရိုက်ပါ။
4. C:\_Windows\_system32 သို့သွား၍ wmpbd32.exe ကို shift+Del ဖြင့်ဖျက်ပါ။
5. Windows ကို restart လုပ်ပါ။
Windows7မှာတော့ အဲဒီဖိုင်က C:\_Users\_username\_ ရဲ့အောက်မှာ photo ဖိုင်အနေနဲ့ ရှိနေပါတယ်။
Windows7msconfig startup မှာ သေချာကြည့်ရင် wmpbd32.exe ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
no have this name...how to do.?
i also like this..how to kill in windows 7..????
I want to know how to kill this virus.